Alan Shearer oo ammaanay wax qabadka xiddig muhiim ka ah kooxda Manchester United – Gool FM
Alan Shearer oo ammaanay wax qabadka xiddig muhiim ka ah kooxda Manchester United
Dajiye December 30, 2020
(Manchester) 30 Dis 2020. Halyeeyga kubadda cagta dalka Englanad ee Alan Shearer ayaa ammaanay weeraryahanka heerka caalami kooxda Manchester United ee Edinson Cavani, kaasoo qaab ciyaareed wanaagsan ku soo bandhigay naadiga xilli ciyaareedkan.
Wargeyska “Daily Star” ayaa wuxuu shaaca ka qaaday hadalada uu Halyeeyga horyaalka Premier League ee Alan Shearer, ku ammaanay Edinson Cavani waxaana ka mid ahaa:
“Marka aad fiiriso qolka labiska si aad u hesho xiddig tayadiisa leh, waxaad noqon doontaa nacas haddii aadan raacin isaga, ha ahaato garoonka gudihiisa ama dibadiisa.”
“Dhamaan ciyaartoyda da’ayarta ah way la socon karaan isaga si ay wax kaga bartaan.”
“Waa xiddig heer caalami ah, waxaan aragnay isaga oo ka qeyb galaya kulankii Leicester mana uusan dhalin wax gool ah, laakiin saameyn weyn ayuu ku yeeshay, wuxuuna caawiyay goolkii Bruno Fernandes.”
“Waxaan mar kale ku aragnay qaybtii dambe ee kulankii Southampton, waxana uu dhaliyay 2 gool wuuna caawiyay, waa ciyaaryahan tayo leh, wuxuu caawin karaa goolal wuuna dhalin karaa.”
Si kastaba ha ahaatee, Edinson Cavani ayaa ku soo biiray Manchester United bishii October ee sanadkan, tan iyo markaasna wuxuu kaga qeyb qaatay maaliyada Red Devils 13 kulan oo tartamada dhan ah, isagoo dhaliyay 4 gool isla markaana caawiyay 2 gool kale.
“Waan awoodnaa inaan hoggaamino Premier League.” – Ole Gunnar Solskjær
Kooxda Arsenal oo bartilmaameed sare ka dhiganaysa laacib ka tirsan Real Madrid... (Miyey la soo wareegeysaa Janaayo?)